Gacanka Kuuriya oo Dagaal Qarka u Saaran – Radio Daljir
Gacanka Kuuriya oo Dagaal Qarka u Saaran
Abriil 28, 2017 8:10 b 0
Qoraaga Roy Williams baa laga hayaa, “Erayo lagu hadlay baa dagaal bilaa oo hadana dagaal dhammeeya … Addunkan keenna ahi, sida aan wada ognahay, wuxuu ku dhisanyahay awoodda erayada aan isticmaalno.”
Gacanka Kuuriya oo sharciyan laba dal ah waa isku dad. Dadka Kuuriyada Waqooyi waxaa xukuma huggaan shuuci ah oo kaligitalis ah, oo awooddu sida boqortooyadii ay dhaxaltooyo tahay. Dhaxaltooyada maanta waxaa haya wiil 33 jir ah, oo aabbihiis dhaxlay, magaciisuna yahay Kim Jong-un. Awoowgiis Kim Il-sung baana awoodda reerka u dhaliyey, illaa iyo aasaaskii Kuuriyada Waqooyi sannadkii 1948. Kim Il-Sung wuxuu afgambiyey xukunkii Boqortooyada Japan sannadkii 1945, dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka kabacdi.
Buugaagtii Kim Il-sung uu ku xardhanaa, oo baalasha cadcaddaa, ee Kacaankii Hantiwadaagu Soomaaliya keenay, qaar baa wali dalka Soomaaliya laga helaa.
Dhanka Kuuriyada Koonfureed, dhib kasta iyo kaligitalis kastaba ha soo marto, laakiin dalka iyo dadku waxay u xuubsiibteen dimuquraadiyad dhab ah iyo horumar baaxad leh. Dhanka teknoolajiyada waxay ku jiraan dalalka safka hore; qalabka ay soo saaraan waxaa loo iibgeeyaa daafaha iyo dacalada adduunka, haba ugu caansanaado taleefoonka Samsung ee Soomaaliya aad looga isticmaalo.
Dhanka horumarka labada dal, haddii aad fiiriso masawir satalaytka cirku qaaday habeen gudcur ah, waxaad arkaysaa in gacanka Kuuriya yahay laba dhinac; dhinac gudcur ah oo dhowr laambadood ka daaranyihiin, waa Kuuriyada Waqooyi, iyo dhan wada iftiimaya, nooc kasta iyo midab kasta oo nal yeelan karo, waana Kuuriyada Koonfureed.
Warku hadduu ku dhacay, maqashay in hal tacab oo kaliya uu maanta Kuuriyada Waqooyi u yahay kan ay isku hallayso. Maya, ee ka dhig laba tacab. Midi waa kan adduunka argagaxa galiyey, waana awoodda ay sheegato ee ah in ay Maraykan, Japan iyo Kuuriyada Koonfureed nukliyeer ku harqinayso. Tacabka kale ee aadan maqal ama aad ka dharagsantahayna waa “ERAYADA” dawladda iyo kuwa kaligitaliyaha da’da yar. Waa “erayo” dhammaantood wada hanjabaad ah. Waa erayo uu dadkiisa maskaxdooda ku marin-habaabiyey, asaga oo u sheegaya in meel adduunka Kuuriyada Waqooyi ka fiican aysan jirin. Waa erayo argagixiyey labada dal ee dariska la ah, waa Kuuriyada Koonfureed iyo Japan.
Labadaas dal, waa Japan iyo Kuuriyada Koonfureed e, badanaa waa iska dhegotiraan erayada kaligitaliyaha, marmarna waaba laaluushaan. Waxaan maqli jiray “haddii aad quryo muraayad ah degantahay, marna dhagaxyo ha tuurin!” Japan iyo Kuuriyada koonfureed waxaa la dhihi karaa waxay deganyihiin guryo wada muraayado ah, meesha Waqooyigu uusan weli guryaha nalal wada galin.
Dhanka dawladda Maraykanka oo ah “hubiyaha nabadda Gacanka Kuuriya iyo badda Basifiga,” sidii loo doortay Madaxweyne Donald Trump siyaasadda USA ma aha tii hore iyo “wax kasta ha la tartiibiyo.” Madaxweyne Trump wuxuu si cad u yiri, Kuuriyada Waqooyi in ay nukliyeer magaalooyinka Maraykanka soo gaaraya haysato wax aan aqbali karo ma aha.
Trump asaga oo hadalkiisa ka dhabaynaya wuxuu diray laba maraakiibta waaweyn ee dagaalka ee loo yaqaan diyaaradqaadka iyo raxamaha maraakiibta ee markabkaas dhulka ah ee soconaya geesaha ka ilaaliya. Waa awood aad u baaxad wayn oo uu huggaaminayo diyaaradqaadka CVN-70 Carl Vinson, waxaana weheliya diyaaradqaadka CVN-76 Ronald Reagan. Intaas kaliya ma aha ee wuxuu ka dabadiray markabka quusa ee gantaal ridaha ah, lana magacbaxay USS Michigan (Ohio Class). USS Michigan waxay hadda ku soo xiratay dekedda Busan ee Kuuriyada Koonfureed, waxaana la socda ciidanka aad u tababaran ee loo yaqaan BAD-iyo-BIRRI (SEALS).
Haddii aad istiri waxa oo dhan waxa ay qayb ka yihiin “erayada” la isticmaalayo, isla shalay wuxuu Maraykanku jiidda hore ku rakibay gantaalada dheereeya ee difaaca ee ka hortagga gantaalada weerarka ah (Terminal High Altitude Area Defense, or THAAD). Ogoow magaalada Seoul waxay 56 KM u jirtaa difaaca ciidamada Kuuriyada Waqooyi, waxaana magaalada dhexdeeda ku nool dad ka badan 10 milyan oo qof, haddii hareeraha lagu darana waa 25 milyan oo qof iyo ka badan.
Su’aal iyo jawaab toona uma baahna haddii dagaal dhaco dhibka imaan kara iyo inta malyan ee qof ee dhiman karta saacadaha ugu horraysa ee dagaalka.
Lama yaqaan meertada siyaasadda taagan, lamana saadaalin karo qorshaha dhinacyada Kuuriya la kala safan, laakiin horaa Soomaalidu u tiri “khayr wax kaama dhimo e shar u toog hay!”
Dhanka siyaasadda dalalka quwadaha waaweyn, siiba Shiinaha iyo Ruushka, waxaa la saadaalinayaa in Shiinuhu uu cadaadiska Kuuriyada Waqooyi badin doono, laakiin hadana sidii loo rakibay gantaalada lidka gantaalaha ee THAAD, Shiinuhu kuma qanacsana qorshaha Maraykanka, marnana raalli ka noqon mayo dagaal lagu qaado Kuuriyada Waqooyi.
Ruushka oo dacalka ugu danbeeya Kuuriyada Waqooyi kala daris ah warar kala duwan baa ka soo baxay oo qaarkood leeyihiin dhaqdhaqaaq ciidan baa dhankaas ka biloowday. Laakiin Ruushku warkaas waa beeniyey. Laakiin waa hubaal in xiriirka Ruushka iyo Maraykanku uu marayo meeshii ugu xumayd abidan.
Hadaba saadaashu ma mid dagaal baa mise waa mid “erayo” oo kaliya ku koobnaan doonta?
Dhanka wararkii ugu danbeeyey ee Maraykanka, taliyaha ciidamada Marayakanka ee aagga Basifiga, Admiral Harry Harris, wuxuu shalay yiri dhoolatuska awoodda Maraykanka waxaa looga golleeyahay in “huggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu xaqiiqada ku baraarugo, ee loogama danlaha in jilbaha dhulka loogu dhufto.”
Hadalkaas waa hadal anfacaya siyaasadda Shiinaha, laakiin rakibaadda uu Maraykanku rakibay gantaalada lidka gantaalada ee THAAD ma aha mid Shiinaha ka indhatiraya siyaasaddiisa badda Bacifiga oo uu Shiinuhu horay u yiri baddaasi ma aha mid u Maraykanku siduu rabo uga amar ku taaglayn karo. Haddii si kale loo yiraahdo, qalalaasaha gacanka Kuuriya waxaa ka horreeyey kii Maraykanka iyo Shiinaha ee Badda Shiinaha (badda koonfurta Shiinuhu waa qayb yar oo ka mid ah badda wayn ee Basifiga).
Siyaasiyiin Shiinays ah baa waxay rumaysanyihiin in qalalaasaha gacanka Kuuriya uu yahay jawaabtii Maraykanku ka bixinayay saldhigyadii jasiiradaha ee Shiinuhu Badda Koonfurta Shiinaha ka dhex dhistay, iskana indhatiray codsiyadii Maraykanka ee ahaa in Shiinuhu joojiyo ficilada lidka ku ah shuruucda caalamka ee khuseeya Badda Koonfurta Shiinaha!
Hadaba su’aal kale baa waxay tahay “gacanka Kuuriya ma Maraykanka iyo Waqooyiga Kuuriya baa isku haysta, mise waxaa isku haysta siyaasadaha lidka isku ah ee Maraykanka iyo Shiinaha ee agga badda Basifiga?”
Haddii dagaal dhaco, saadaashu aad ha u yaraato e, jawaabtu waa caddahay, laakiin haddii uusan dagaal dhicin, il gaar ah u yeelo heshiiska ay wada gaaraan Maraykanka iyo Shiinuhu, kaas oo aan ku koobnaan doonin Kuuriyada Waqooyi, laakiin biloow u noqon kara isfaham waara oo laga gaaro Bariga Fog iyo Badda Basifiga.
Maabka Badda la isku haysto ee Koonfurta Shiinaha
Adm. Harry Harris, US Pacific Command
Kim Jung-un, Huggamiyaha Kuuriyada Waqooyi
USS Michigan, a nuclear-powered submarine armed with Tomahawk cruise missiles, Ohio Class
Qormooyinka Daljir 52 Wararka 19761
Barnaamij Gaar ah oo Daljir Ka Diyaarisay Jaamacadda Cadduun Galkacyo (DHEGAYSO)